"C - Teles RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE "C
"Waa wax aan la aqbali karin". Bishii Sebtembar, Veronique Sanson lagu qasbayjoojiyaan dhowr riwaayado si loo helo daaweyn a kansarka cunaha. Dhowr bilood ka dib, waxay lahayd mar dambe dib u dhig muujiyeyaashiisa si ay u dhawraan mudada soo kabashada. Inkastoo ay dhawaan soo celisay marxaladdeedii, heesaha ayaa ku doodaya naftiisa "Aad baan u adkeeyay". "Laakiin ma sugi karo", ayay sheegtay in ay wareysi la yeelatay daqiiqado 50, oo lagu baahiyay Sabtida 6 April.
Iyo sabab wanaagsan Veronique Sanson wuxuu jeclaan lahaa inuu u mahadceliyo dhagaystayaashiisa, kuwaas oo isaga taageera intii uu jiranaa. Inkasta oo ay u qalantid dib udhigyadan sidii waxyaabo "Oon la dhaafi karin". "Uma maleynayo inaan la aqbali doono wax aan la aqbali karin"ayay raacisay. Iyo goorma Nikos Aliagas wuxuu qeexayaa in la joojiyo riwaayadaha "Sababo Caafimaad" waa wax "Cafin karo"muusiggu ma tixgeliyo habkan. "Waa wax aan la aqbali karin. Marnaba waan joojiyay xaflad "Waxay soo gabagabeysay.
Sidaa darteed waa la cafiyan, Veronique Sanson wuxuu u dabaaldegi doonaa dhalashadiisa 24 ee xiga wareegga isboortiga ee Paris waxaana uu ku socon doonaa Faransiiska laga bilaabo 3 Abriil ilaa 16 bisha May ee soo socota. Hase yeeshee ka hor inta aan dib loo soo celin xafladaheeda, heesaha ayaa sidoo kale la yaabay aragtida dadweynaha ka dib markii uu muujiyay kansarkeeda: "Waxaan doonayay inaan dib u dhaco Waxaan ka baqayay inay iigu egyihiin si naxariis leh" waxay ku qancisay RTL 4 bishii Abriil ee la soo dhaafay.
Véronique Sanson: "Waa wax aan la aqbali Karin": Véronique Sanson ayaa isku dayday inuu joojiyo riwaayadihiisa sababtoo ah kansarkiisa
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/c-est-impardonnable-veronique-sanson-s-en-veut-d-avoir-du-annuler-ses-concerts-a-954036
Maya, Celine Dion ma uusan tagin waali: "Waxaan bilaabay inaan noolaado"